သိန်းသုံးရာအလှူတော် – Blue Sea
blueseaskt | August 20, 2019 | News | No Comments
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း ဦးဆောင်ဆရာတော်များ မွန်ပြည်နယ် သဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေ ကျပ် သိန်း(၃၀၀)ကျော် ပေးအပ်လှူဒါန်း
ကျေးဇူးတော်ရှင် အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ခံယူ၍
ဗုဒ္ဓဓမ္မပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်း ဦးဆောင်ဆရာတော်များက
ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကာ မွန်ပြည်နယ် ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတ ဖောင်ဒေးရှင်း
သဘာဝဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေး ဦးဆောင်ဆရာတော်များထံ ယနေ.(၁၀.၈.၂၀၁၉) နေ့လည်ပိုင်းက
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ဦးဆောင်ဆရာတော်များ ဖြစ်ကြသည့် မြစေတီဆရာတော်ကြီး၊ မြနန်းဆရာတော်၊ ဟိတဓရဆရာတော်၊ ဒေါက်တာအရှင်သောပါက၊ ပွင့်လင်းဆရာတော်စသော ဆရာတော်များ၊ သဘာဝဘေးသင့်ပြည်သူများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသော ဆရာတော်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ
အခမ်းအနားတွင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ သဘာဝဘေးသင့်ရာ ဒေသများအား သင့်တော်သည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်
၂။ မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဆရာတော်ဦးဆောင်သော မဇ္ဈိမ သာသနာပြုဥပတ္ထမ္ဘကအဖွဲ့မှ အလှူငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀)၊
၃။ မွန်ပြည်နယ် ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း မှ
အလှူငွေ ကျပ်သိန်း (၃၀)
၄။ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မဇ္ဈိမ ဂုဏ်ရည်ဆရာတော်၏ တပည့်များမှ
အလှူငွေ ကျပ် (၁၈)သိန်း၊
(စိန်ပန်းမြိုင် မိသားစု) မှ
အလှူငွေ ကျပ်သိန်း (၂၀)၊
စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း (၃၁၈)တိတိ ပေးအပ်လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မြစေတီဆရာတော်ကြီး ဦးဆောင်သော ဖောင်ဒေရှင်း ဦးဆောင်ဆရာတော်များဟာ သဘာဝဘေးသင့်ရာ ဒေသများသို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး လိုအပ်သော ကူညီမှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြရန် မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။
မိမိတို့ တိုင်းပြည် လူမျိုးများ ဒုက္ခရောက်လာချိန်တွင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ
စွမ်းနိုင်သလောက် စွမ်းနိုင်ရာက စတင် ကူညီဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးတွင်းကာလရောက်လာရင် နှစ်စဉ်လိုလိုပင် ရေဘေးကူညီရေးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့အဖွဲ့များက ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုနှစ်လည်း မွန်ပြည်နယ်မှာ ရေဘေး သင့်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဉာတတ္ထစရိယ ကျင့်စဉ်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့အတွက်ကြောင့် မိမိအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအလွန်မွန်မြတ်သော ကရုဏာအလှူတော်လုပ်ငန်းကို အခက်အခဲအကျပ်တည်းကြားမှပင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါတယ်။
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပူးပေါင်းကာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့လည်း တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
ဗုဒ်ဓ ဓမ်မ ပရဟိတဖောငျဒေးရှငျး ဦးဆောင်ဆရာတ်မျောား မွနျပြည်နယျ သဘာဝဘေးသငျ့ပြညျသူများအတွကျ အလှူငွေ ကျပျ သိနျး(၃၀၀)ကျော ပေးအပ်လှူဒါနျး
ကျေးဇူးတျောရှငျ အငျးစိနျရွာမဆရာတျောကွီး၏ လမျးညှန်ချက်ကို ခံယူ၍
ဗုဒ်ဓဓမ်မပရဟိတ ဖောငျဒေးရှငျး ဦးဆောင်ဆရာတ်မျောားက
ကိုယ်တိုငျသွားရောက်ကာ မွနျပြည်နယျ ဗုဒ်ဓဓမ်မ ပရဟိတ ဖောငျဒေးရှငျး
သဘာဝဘေးကူညီကယ်ဆယျရေး ဦးဆောင်ဆရာတ်မျောားထံ ယနေ.(၁၀.၈.၂၀၁၉) နလေ့ည်ပိုငျးက
အဆိုပါ အခမျးအနားတွငျ ဦးဆောင်ဆရာတ်မျောား ဖြဈကွသညျ့ မြစေတီဆရာတျောကွီး၊ မြနနျးဆရာတျော၊ ဟိတဓရဆရာတျော၊ ဒေါက်တာအရှငျသောပါက၊ ပွငျ့လငျးဆရာတ်စောသော ဆရာတ်မျောား၊ သဘာဝဘေးသငျ့ပြညျသူများ ကူညီဆောငျရွကျပေွးကသော ဆရာတ်မျောားနှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလ်များ
အခမျးအနားတွငျ မွနျပြည်နယျအတွငျးရှိ သဘာဝဘေးသငျ့ရာ ဒသေများအား သငျ့တျောသညျ့ ပြန်လည်ထူထောငျရေးများ ပြုလုပျနိုငျရနျအတွကျ
၂။ မဇ်စိမဂုဏျရညျ ဆရာတျောဦးဆောငျသော မဇ်စိမ သာသနာပြုဥပတ်ထမ်ဘကအဖွဲ့မှ အလှူငွေ ကျပျသိနျး (၅၀)၊
၃။ မွနျပြည်နယျ ဗုဒ်ဓဓမ်မ ပရဟိတဖောငျဒေးရှငျး မှ
အလှူငွေ ကျပျသိနျး (၃၀)
၄။ ထိုငျးနိုငျငံရောကျ မဇ်စိမ ဂုဏျရည်ဆရာတျော၏ တပညျ့များမှ
အလှူငွေ ကျပျ (၁၈)သိနျး၊
(စိန်ပနျးမွိုငျ မိသားစု) မှ
အလှူငွေ ကျပျသိနျး (၂၀)၊
စုစုပေါငျး ကျပျသိနျး (၃၁၈)တိတိ ပေးအပ်လှူဒါနျးနိုင်ခဲ့ပါတယျ။
မြစေတီဆရာတျောကွီး ဦးဆောငျသော ဖောငျဒရှေငျး ဦးဆောင်ဆရာတ်မျောားဟာ သဘာဝဘေးသငျ့ရာ ဒသေများသို့ ကိုယ်တိုငျ သွားရောကျ ကွညျ့ရှုခဲ့ကွပွီး လိုအပျသော ကူညီမှုများ ဆက်လကျဆောငျရွကျကွရနျ မိနျ့ကွားတ်မောူခဲ့ကွပါတယျ။
မိမိတို့ တိုငျးပြညျ လူမိုးများ ဒုက်ခရောက်လာခိန်တွငျ တတျနိုင်တဲ့ဘက်ကနေ
စွမျးနိုငျသလောကျ စွမျးနိုငျရာက စတငျ ကူညီဆောငျရွက်လာခဲ့ကွတာ ဖြစ်ပါတယျ။
မိုးတွငျးကာလရောက်လာရငျ နှစ်စဉ်လိုလိုပငျ ရေဘေးကူညီရေးလုပျငနျးများကို မိမိတို့အဖွဲ့များက ဆောငျရွကျနိုင်ခဲ့ကွပါတယျ။
ယခုနှစ်လညျး မွနျပြည်နယ်မှာ ရေဘေး သငျ့မှုတွေ ဖြဈပျေါနတေဲ့အတွကျ ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးလုပျငနျးများ ဆောငျရွကျကွခြငျး ဖြစ်ပါတယျ။
ထိုသို့လုပျဆောငျခြငျးဟာ မြတ်ဗုဒ်ဓအလိုတ်ကျော ဉာတတ်ထစရိယ ကျငျ့စဉ်လုပျငနျးဖြစ်တဲ့အတွကျ လုပျသငျ့လုပ်ထိုကျသော လုပျငနျးလညျးဖြစ်ပါတယျ။
သို့အတွကျကွောငျ့ မိမိအဖွဲ့အနေနဲ့လညျးအလွန်မွနျမြတျသော ကရုဏာအလှူတ်လောုပျငနျးကို အခကျအခဲအကျပ်တညျးကွားမှပငျ ဆက်လကျဆောငျရွက်လျကျ ရှိနပေါတယျ။
ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးလုပျငနျးများကိုလညျး ပူးပေါငျးကာ ဆက်လကျဆောငျရွကျသွားကွပါလို့လညျး တိုက်တွနျးအပ်ပါတယျ။
Ministry of Buddha ဖာငျ Foundation Flag ဆောင် ရာတ် Morocco is measured by speed ပည် natural Wai ဘး Q. Your Local သူမျ တွကျ assaulted ငွေ web apps hundred (300) Server application assaulted be donated
Zoo shouts Insein search they received no new ညှန် coming
Buddhist Charity Foundation Flag ဆောင် Q. ရာတ် Maw
Fast ပည် natural Wai ဘး Q. Your Local သူမျ
Go for ကိုယ် ရောက် fast ပည် Buddhist Charity Foundation issue
Natural ဘး help distribute ten ကယ် ဆောင် ရာတ် Morocco is measured. Today (10.8.2019) လည်
Grrr assaulted partially the ceremony be donated လုပ်.
The ceremony တွငျ ဆောင် ရာတ် Morocco Event Q. May I, မနနျး Bishop The mansion, Bishop ဒေါက် shouts, Open earlier ရာတ် ရာတ် Maw is measured, Natural Wai ဘး help Q. Your Local သူမျ ရွကျ Q. ရာတ် Mao manna Q. People ဂိုလ်
Q. sight ကယ် ten missed သူမျ ရောက်.
တွငျ fast ceremony ပည် တွငျး divide its natural ဘး president of data measured by the establishment of suitable လည် stake is measured and to allow for the တွကျ
Buddhist center of the ဖာငျ Foundation issue
In the assaulted ငွေ half (200 million),
2. မဇ်စိမ eggs quality of the monk-led nations မဇ်စိမ hinge ထမ် ဖွဲ့ assaulted ငွေ web apps (50 million),
3. Fast ပည် Buddhist priests ဖာငျ Foundation issue
In the assaulted ငွေ half (30 million)
4. Thailand pride မဇ်စိမ ရည် Q. Bishop disciples
In the assaulted ငွေ half (18) million,
5. ထွဋျ Win + million aunt Mary St.
(စိန် Myaing family)
In the assaulted ငွေ half (20 million),
In the total half Exactly one hundred (318) application assaulted နိုင် be donated.
I Foundation led by its ဆောင် ရာတ် Morocco should be measured byanatural Wai ဘး president of data measured by ကိုယ် pillars necessary for Go Visit မှုမျ help customers ဆက် gift ရွကျ urged stories မောူ said.
Their Local IFV ဒုက်ခေ ရာက် ခိန် တွငျ နိုင် Battery Canada
စွမျး much is being able to help start စွမျး became ရွက် ဖစ်.
Even if တွငျး ကာလေ ရာက် နှစ် စဉ် ရေေ help ဘး Serviceားကို their ဖွဲ့ IFV ရွကျ နိုင်.
Now fast နှစ် ပည် နယ် has ရေေ ဘး its motivating your time to help တွကျ ရှောကျ Service IFV ရွကျ spread ကြွ ဖစ်.
It spread in March Buddhist လိုတ် glue mental တတ်ထ of pig စဉ် ဖစ် တွကျ လုပ် ဖစ် worthy.
တွကျ ဖွဲ့ tasks faster လွန် March mercy လှူတ် no difficulty လောုပျ goose app ဆက် gift ရွက် top half missed.
Q. Assistance ရှောကျ Service ဆက် collaboration also presents ရွကျ straight တိုက် တွနျး application.
ရှောကျ guard Shannon ဆန် Kurdish masculine half –
ဆောင် ဝန် Bishop
(Natural Wei help ဘး ရှောကျ)
ချစ်သူကို ဓားနဲ့ထိုးပြီးနောက်၊ သေမှာစိုးလို့ ဖက်ပြီးငိုယိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး
ဘင်္ဂလာ​ဒေ့ရှ်​ ​သတင်းစာစွပ်​​ဖော်​ပြချက်​ကို မြန်​မာသံရုံးပယ်​ချ
မြန်မာနယ်စပ်အနီး ကော့ဘဇားတွင် လေတပ်စခန်းဋ္ဌာနချုပ်တစ်ခုထပ်မံဖွင့်လှစ်တော့မည့် ဘင်္ဂလားလေတပ်